Waa kuma wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira. | dayniiile.com
Home WARKII Waa kuma wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira.
Waa kuma wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira.
Francisco Caetano Jose Madeira, ayaa ku dhashay Mozambique April4,1954. Ayaa loo magacaabay wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa bishii October 2015-kii asiga oo xilka ka beddelay Maman Sambo Sidikou oo ka soo jeeday Dalka Niger.
Mandeira ayaa shahaadada Diploma ka haystaa xiriirka Caalamiga ah isagoo ka qaatey the Center for Foreign Relations ee Dar-esSalaam, Tanzania, Waxaa kaloo Jaamacadda koobaad ka helay University of Eduardo Mondlane ee magaalada Maputo,Mozambique.
Francisco Madera ayaa sida oo kale soo noqday safiirka Mozambique u metalaya dhowr waddan oo Afrikaan ah, laga soo bilaabo 1984 ilaa 1989, iyo lataliyaha diblomaasiyadeed ee madaxweynaha dalkaas. Wuxuu xubin ka ahaa wafdiga dowladda ee wadahadalada nabada ee uu la yeeshay Renamo, kaas oo sababay in la saxeexo heshiiskii Guud ee Nabadda ee Rome ee ku aaddanaa Mozambique.
Wuxuu qabtay sida oo kale xilal wasiirnimo, isagoo ahaa, 1995 ilaa 1999, wasiirka xafiiska Madaxweynaha ee arrimaha baarlamaanka iyo, laga soo bilaabo sanadkii 2000 ilaa 2010, wasiirka xafiiska Madaxweynaha ee arrimaha diblomaasiyadeed.
Amassador Francisco Caetano Madeira ayaa noqday Ergeyga gaar ah ee Madaxweynaha Mozambique Joachim Chissano inta uuahaa Guddoomiyaha AU dalka Sao Tome and Principe.
2003 waxaa uu qeyb ka ahaa dadkii dhex dhexaadinayey dowladda Suudaan iyo Mucaaradka LRA, 1999-2010 waxaa uu ahaa Ergeyga Midowga Afrika ee Jaziiradda, Waxaa kaloo uu inta u dhaxeysay January 2005 ilaa January 2010 ahaa xubin ka tirsanBaarlamaanka dalkiisa.
Sanadkii 2010, Ambassador Madeira waxa uu ahaa Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan La-dagaalanka Argagaxisada iyo Agaasimaha Xarunta Cilmi-baarista iyo la dagaalanka Argagixisadda ee fadhigeedu yahay Aljeeriya (ACSRT)Arrinta Ciidanka iska caabinta Lord (LRA), laga bilaabo Noofambar 2011 ilaa Luulyo 2014.
Magacaabistiisa ahayd Madaxa Cusub ee AMISOM ayaa timid waqti ay isku dayeyaan in ay dadajiyaan xasilinta Soomaaliya, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dhawaan u codeeyay in AMISOM lagu bedelo howlgalka kala guurka ee Afrika ee Soomaaliya (ATMIS).
Muddo 15 sano ah, askarta Afrikaanka ah waxay isku baddalayeen Soomaaliya, iyagoo qayb ka ah 20,000 oo askari oo ay Qaramada Midoobay u xilsaartay inay dawladda dhexe ee taagta daran ka difaacaan Islaamiyiinta ah ka dagaalama gudaha Soomaaliya.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) oo la aas aasay sanadkii 2007-dii ayaa waxaa sameeyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana loo xil saaray la dagaalanka Xarakada Al-Shabaab oo isku dayaya in ay afgambiyaan dowladda Muqdisho ka dhisan.
Ciidamada oo laga soo aruuriyay guud ahaan Afrika, ayaa Al-Shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011, taas oo abuurtay xasilooni ku filan oo ay ku dhismaan hey’adaha dowladda iyo kuwa federaalka, waxaana la qabtay labo wareeg oo doorasho ah.
Shan iyo tobanka sano ee ay AMISOM joogtay Soomaaliya waxa ay dowladda Soomaaliya ka taageertay sugidda amniga goobaha muhiimka ah ee caasimadda, sida garoonka diyaaradaha, dekadda iyo xafiisyada madaxda sare. Waxa kale oo ay Al-Shabaab ka saartay magaalooyin muhiim ah.
Ugu Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa muddo 48 saacadood guduhooda u qabtay in uu dalka kaga baxo wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira, sida lagu sheegay warqad xalay xilli danbe ka soo baxday xafiiskaas, ayada uu ka hor yimid Madaxweynaha Muddo Xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Previous articleXarunta Lasocodka Doorashada Ee Bulshada Rayidka Oo Walaac Ka Muujisay Xaaladda Dalka
Next articleCiidanka Booliiska Soomaaliya oo toogasho ku dilay nin dilay Askari ka tirsanaa ciidamada Dowladda
The Jerusalem march of Israeli ultra-nationalists is being stifled by police.
Taliska Ciidanka xoogga oo soo bandhigay Xubin katirsan Al-Shabaab oo isku...
Qiimaha shidaalka aduunka oo mar kale aad sare u kacay